Myanmar Industrial Digest
မြန်မာစက်မှုဒိုင်ဂျက်အတွက် ကြော်ငြာများဖိတ်ခေါ်ခြင်းမြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း (Myanmar Industries Association) သည် မြန်မာစက်မှုဒိုင်ဂျက်ကို ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ၍ ပုံစံသစ်ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော် ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါသည်။
စာစောင်ပုံစံသစ်မြန်မာစက်မှုဒိုင်ဂျက် (Myanmar Industrial Digest) ကို Reader’s Digest ပုံစံ စာမျက်နှာ(၁၂၈)မျက်နှာ ရောင်စုံစာစောင်အဖြစ် အသွင်တစ်မူထူးခြားစွာ (၃)လတစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေလျက်ရှိပြီး စောင်ရေ (၃၀၀၀) ထုတ်ဝေပါသည်။
သို့ပါ၍မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း အသင်းဝင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှ ကြော်ငြာ ထည့်ဝင် ကူညီကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ကြော်ငြာခစာစောင်တွင် ရောင်စုံကြော်ငြာများကို Art Paper 100 gms ဖြင့် ရိုက်နှိပ် ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်၍ စာမျက်နှာပြည့်ကြော်ငြာ(၁)ခု သို့မဟုတ် စာမျက်နှာဝက် ကြော်ငြာ(၂)ခု ထည့်သွင်း နိုင်ပါသည်။
Back Cover Ks. 150,000
Inside Front Cover Ks. 120,000
Inside Back Cover Ks. 120,000
Inner Colour Page Ks. 100,000
ဒီဇိုင်း ကြော်ငြာရှင်မှ ကြော်ငြာဒီဇိုင်း (စာခွင်ပြည့် ၆.၈ x ၄.၆ လက်မ) ကို CD ဖြင့် ပေးရပါမည်။ စာမျက်နှာပြည့် (၇.၂ x ၅.၁ လက်မ) ကြော်ငြာထည့်လိုပါက ဒီဇိုင်းအရွယ်အစားကို စစ်ဆေး ပြုပြင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းအရွယ် အစား ပြင်ဆင် ပေးခြင်းအတွက် ပေးခြင်းအတွက် ဆောင်ရွက်ခ သီးခြား ကောက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ ဖလင်ခွဲခ သီးခြားကောက်ခံခြင်း မပြုပါ။ ဒီဇိုင်းအသစ် ပြုလုပ် ပေးရပါက သတ်မှတ်နှုန်းထားများ အတိုင်း ကောက်ခံပါမည်။
ငွေပေးချေ ခြင်းကြော်ငြာ တစ်ကြိမ်ထည့် သွင်းခြင်းအတွက် ကြော်ငြာခကို ဒီဇိုင်းအပ်နှံ ချိန်တွင် တစ်ပါတည်းငွေပေးချေရပါမည်။ တစ်နှစ်ကြော်ငြာများ (၄ကြိမ်) အတွက် နှစ်ကြိမ်ခွဲ၍ ပေးချေနိုင်ပါသည်။
ကြော်ငြာ ဌာန ကြည်ကြည်လွင် Sales Coordinator
ဝင်းနီလာထွန်း Sales Assistant
6th Floor, Pyi Myanmar Dept Building. Corner of Hledan & Insein Rd., Kamayut
Tel:(951) 527798, 536151
Fax: (951) 525050, 525740